Ukubuyekezwa kwe-Cuup: Abahleli be-5 Glamour 'Zama i-Virtual Bra Fitting - Isitayela
Abahleli be-Glamour 5 Beka uCuup's Barely There Bras esivivinyweni
Isimangalo: indwangu encane, ukwesekwa okwengeziwe
Noma yini ingenzeka ngaphezulu kwe-Zoom kulezi zinsuku-ukufakwa kwe-bra kufakiwe. Kubukeka kungqubuzana nenqubo, kepha yilokho kanye esikubeka ukuthola ngokubuyekezwa kwethu kweCuup. Masibhekane nakho: Ukufakwa kwe-bra komuntu ngaphakathi okubi kakhulu . Uvame ukudonswa futhi ugxishwe egumbini lokugqoka elincane elinokukhanya okungekuhle futhi akukho lutho oluyimfihlo, futhi konke kwenzeka ngokushesha okukhulu. Kungenzeka ukulingana okuku-inthanethi empeleni umsebenzi?
Okusibuyisela emuva Coup , uhlobo lwangaphansi lomkhiqizo olwaziwa ngenqubo yalo yokulinganisa, izindwangu zokusebenza okuphezulu, nezithombe ezincane kodwa ezisekelayo. Isikhalazo esibukwayo singokoqobo futhi, njengamanye amaningi we izingubo zangaphansi izinkulungwane zeminyaka yokuqalisa zithanda ukuthenga, i-Cuup izikweletu uqobo njengenkampani emishini yokuchaza kabusha indlela abesifazane ababukeka nabazizwa ngayo ezingutsheni zabo zangaphansi.
Ikwenza lokho, ngokwengxenye, ngokubeka phambili ukulingana nekhwalithi, kepha nangokulalela amakhasimende nezidingo zawo. Kubathengi abangaba khona, i-Cuup inikezela ngokulingana kwamahhala kwemizuzu engu-20 ngesazi sebhodisi. Laba baxhumanisi baqeqeshiwe ukusebenzisa i-Zoom ukubamba ukufakwa kobhodisi selokhu lo mkhiqizo wethulwa ngo-2018, okwenza uCuup abe ngomunye wama-O.Gs kulesi sikhala kusukela ngaphambi kwalolu bhubhane. Indlela esebenza ngayo: Isazi kuqala sikubuza ukuthi ubukade ufaka usayizi onjani, ukuthi yiziphi izitayela zebra zakho ozikhethayo, nokuthi ngabe wake wakufaka ubhodisi noma cha ngaphambili. Ngemuva kwenhliziyo-kuya-enhliziyweni-ezizwa isondelene futhi ingeyakho (kepha ingakhululeki) -ungcweti wakho uhamba ngezinyathelo zokukala i-bust ne-band yakho. Ngokuya ngalezi zinombolo, uthola izincomo ezimbili zosayizi we-bra, ezingasiza ekwaziseni ukuthi uthenga hlobo luni lobhodisi.
Isazi esilinganisa uCuup sikaBra, uTania (phezulu kwesobunxele), kanye ne- Ubuhle iqembu.
Futhi uma kukhona okufana nathi, usuvele ufuna ukwengeza wonke umugqa kaCuup enqoleni. Its izingubo zangaphansi ibonakala ishaya indawo emnandi: izitayela ezinhle, ezisekelayo; amanani entengo: nezinketho ezanele ongakhetha kuzo ongazizwa ucindezelekile. Kuze kube manje, lo mkhiqizo uthengisa izitayela zebra ezinhlanu kuphela, ngakunye ngo- $ 68 nangosayizi osukela ku-30A kuye ku-38H. Ziyi-undies yansuku zonke esekelayo neyakhekayo ngaphandle kwezinto zokwedlulela, futhi uma ubheka ukwakhiwa, akukho foam noma i-padding etholakalayo — ukwesekwa okulula nje ngenxa yendwangu yesiginesha yeCuup kanye ne-underwire eguquguqukayo.
Kuyindlela enhle yokunethezeka kulezi zikhathi zobhadane. Ngakho-ke, ngokulangazelela kwethu ukwaziwa, sihlele okufakwa okuyisihlanu okuzenzakalelayo ukuze sizibonele mathupha inqubo-kanye nokubona ukuthi izitayela zomkhiqizo ngokulambisa-lapho-kodwa-kuyo yonke indawo empeleni zingaphila ngokuvumelana ne-hype. Funda imicabango yethu eqotho ngenqubo efanelekile yomkhiqizo, nokubuyekezwa kwethu okugcwele kweCuup, ngezansi.
UShanna Shipin, umhleli wezohwebo
Ngokuzithoba kukaShanna Shipin
Bekunjani isipiliyoni esifanelekile? Ngabe iqhathaniswa kanjani nokulingana okungaphakathi komuntu? Ngiyithandile! Isazi esifanelekayo besinolwazi oluningi futhi singadlulela kumuntu oqinisekisa isiqu somzimba — ngifuna anginikeze izinkulumo zokukhuluma njalo ekuseni. Izinto ezifakwa ngaphakathi esitolo zivame ukushesha kakhulu futhi zingenzi ubuntu; Empeleni ngithanda kakhulu ifomethi ende lapho isihlanganisi sazi kahle ukuma kwebele lakho nokuncamelayo.
Bekuyini usayizi wakho onconyiwe? Ingabe behlukile kulokho ovame ukukuthola? Nginconywe i-32C, okuyisayizi yami ejwayelekile.
Yimaphi ama-bras nama-undies owathengile? Uthe nginama-boobs amise okwemvelo (engiwabiza ngokuthi ama-ski slopes amancane) futhi ngawancoma I-Balconette , njengoba yakheke ukubamba amabele agcwele ezansi. Bekumele ngiyithole kuLeopard kwazise kade ngiyibheke ku-IG ingunaphakade. Nami ngathola Ukuwa ku-Espresso ephuphayo. Kade ngigqoka ama-undies ngokumbozwa okuningi kulezi zinsuku, ngakho-ke ngizamile I-Bikini (eLeopard) kanye Okufushane (e-Espresso). Zithambile futhi zinethezekile, futhi zilala zicabalele-kodwa ungaba ne-VPL (uma lokho kuyinto oyikhathalelayo).
Iyini imicabango yakho ngokulingana, ikhwalithi, nokuklanywa kwama-bras? Ama-bras afana nama-bralettes ane-underwire-anethezekile kakhulu kepha asaphatha ukuhlinzekelwa (ngaphandle kwengxenye enkulu) nokuma. Zikulungele ukuhlala ngokuhlukaniswa nobusuku obubodwa lapho lezo ziphinde zaba yinto futhi. Kokubili kungilinganisa ku-T, kepha ngithanda i-Balconette kune-The Plunge-kukhona okuncane nje kokupha phezulu kwe-The Plunge kimi.
imibono yezocansi engaqondakali nesoka
Ungayenza yini into yokufaka ubra ebonakalayo futhi? Impela-kepha ngaphandle kokuthi amabele ami aguquke ngosayizi, angicabangi ukuthi ngiyawadinga!
Cuup I-Balconette eLeopard
$ 68 Coup Thenga Manje
Cuup I-Bikini e-Leopard
$ 18 Coup Thenga Manje
Cuup The Plunge e-Espresso
Cuup Okufushane ku-Espresso
ULindsay Schallon, umhleli wezobuhle omkhulu
Ngokuzithoba kukaLindsay Schallon
Bekunjani isipiliyoni esifanelekile? Ngabe iqhathaniswa kanjani nokulingana okungaphakathi komuntu? Cabanga ngalokhu okucela kwami ​​ukuthi konke ukufakwa kwebhodisi kube yinto ebonakalayo. Anginamahloni ikakhulukazi ngomzimba wami eduze kochwepheshe — kungumsebenzi wabo ukuthola izandla. (Esidlangalaleni yindaba ehlukile.) Kepha ngaphezu kohlelo lokusebenza lwe-Zoom ocingweni lwami, bekungadingeki ngikhathazeke ngokuma kabi phambi kwesibuko esikhanyisa udoti ngenkathi othile eshaya futhi egudla amabumbu ami. Owesifazane owenza ukubonisana kwami ​​ubesasebenza ngobungcweti futhi ephelele. Ngichaze phezu kwekhamera ukuthi izingqinamba zami ezinkulu ezinama-bras ukwesekwa nokuchithwa, nokuthi ngihlala kanjani ngigcina ngebra elilingana nebhendi kepha lincane kakhulu enkomishini, noma lilungile enkomishini kepha i-underwire iyangena izinhlangothi zami. Uyazi, izinkinga zakudala ze-boob!
Bekuyini usayizi wakho onconyiwe? Ingabe behlukile kulokho ovame ukukuthola? Imvamisa ngingu-36G, kepha ngifake isisindo esincane ngokuhlukaniswa, ngakho-ke benginomuzwa engingahle ngiwudinge ukukhulisa. Ngangiqinisile. Ngemuva kokuxoxa ngokuhlola ubhodisi wami okhululekile kakhulu, sobabili savumelana ukuthi ibhendi ilingane kahle kodwa bengichitha inkomishi yami kancane. Uphakamise ukuthi ngizame i-36H bese ngi-oda i-38G njengesipele.
Yimaphi ama-bras nama-undies owathengile? Ngoba ukwesekwa kuyinto ebaluleke kakhulu kimi, ngahamba umzila wakudala nge-The Demi, inketho yokuhlanganisa okugcwele kakhulu uCuup anakho. Futhi njengoba ngangingenasiqiniseko sokuthi iyiphi kulezi zingwazi ezimbili ezazilingana, ngaba mnyama kuzo zombili — uma kungenzeka. Ngama-undies, bengilokhu ngiyintombazane e-thong, kodwa izwi lesixwayiso: i-Cuup's imicu ugijime kancane. I-XL (usayizi omkhulu abangena ngayo nosayizi wami ojwayelekile) iyangicika.
Cuup The Demi Mesh kokumnyama
Cuup The Thong eMnyama
Iyini imicabango yakho ngokulingana, ikhwalithi, nokuklanywa kwama-bras? Ngishaqekile— uthukile! -Ngokuthi ngiwathanda kangakanani la mabrazi. Mhlawumbe ngoba kuze kube unyaka noma emibili eyedlule, ngangihlala ngithenga emakethe ethile yezitolo ukuze ngithole ama-bras futhi ngicabanga ukuthi ukugoqa amagwebu kwakudingeka uma unama-boobs amakhulu-njengokuthi ngandlela thile wabumba amabhulu akho futhi wasiza ukuwabamba kangcono. Ngokusobala, nganginolwazi olungelona iqiniso, ngoba ukwakheka kwalesi sibongo kuhle kakhulu futhi kusekela. Indwangu ifana nocwecwe olujiyile, olunentwasahlobo olushubile kodwa olungaboni (uCuup uyibiza ngokuthi indwangu yesikhala). I-underwire nezinkomishi zinika ukuma okuthile, kepha hhayi kangangoba ngizizwa ngicindezelwe. Into eyodwa engithole ukuthi inzima kancane ekuqaleni yiqembu. Ama-36 ayeqinile impela, engicabanga ukuthi kungamabomu ngoba kukhulula okuncane ngokugqoka. Noma kunjalo, bengilokhu ngithola ukuthi ngifuna ukugqoka i-38G ngaphezulu ngoba ayinqumi embizeni yami kakhulu. Okunye okubi ukuthi i-Demi iza ngemibala emithathu kuphela (emnyama, i-taupe, ne-blush). Ngiyawathanda amaphethini wokuzijabulisa nemibala ekhanyayo ezinye zezinye izitayela ezingena-ngicela uzinwebele kuzo zonke izitayela, Cuup!
Ungayenza yini into yokufaka ubra ebonakalayo futhi? Yebo! Kwakulula kakhulu. Vele uqiniseke ukuthi unohlobo olulungile lweteyipu esandleni.
U-Erin Parker, umbhali wezohwebo
Ngokuzithoba kuka-Erin Parker
Bekunjani isipiliyoni esifanelekile? Ngabe iqhathaniswa kanjani nokulingana okungaphakathi komuntu? Ukulinganisa kwami ​​okubonakalayo kwakulula umoya. Uchwepheshe ofanelekayo wayepholile futhi efundisa kakhulu, futhi ngathola ukuthi kungenzeka ukuthi ngangigqoke usayizi we-bra ongalungile isikhathi esithile manje. Bengingakafaneleki kahle eminyakeni, ngakho-ke impilo yokuvalelwa yedwa iyithuba elifanele lokuyilungisa unomphela, kusukela esiteshini sami se-WFH.
Bekuyini usayizi wakho onconyiwe? Ingabe behlukile kulokho ovame ukukuthola? Ngokuya ngezilinganiso zami, empeleni wancoma usayizi wekomishi elilodwa omkhulu kunalokho engivame ukukugqoka. Ngithole ubhodisi owodwa ngosayizi wami ojwayelekile futhi ngilinganisela omunye, futhi womabili alingana kahle!
Yimaphi ama-bras nama-undies owathengile? Ukuvuka kabusha kwephenti likagogo akubambezeli, futhi ngemuva kokubona okungenakubalwa okuthunyelwe kwe-chic kwe-Instagram okuqukethe ama-undies ezinqeni eziphakeme ezizwakala njengamanje hhayi ezomfutho, nginqume ukuzama I-Highwaist futhi I-Balconette , bobabili baseNgwe. Isethi iletha i-retro vibe emnandi enhle ngokwanele ukugqoka endlini kodwa ukumbozwa okugcwele okwanele ukubheka isicupho sokoma. Ukukhetha kwami ​​kwesibili kwaba Ukuwa futhi Ubambo eCitrine, i-hue ephuzi kagesi ezonikeza ikhabethe lakho eliphezulu ngomthamo wobungqabavu lapho sonke sizizwa sifile ngaphakathi noma kancane. Yishiye kwabanye ababhisi nama-undies afanayo ukukuqinisekisa ukuthi unempilo yakho ndawonye yize ungenjalo!
Cuup The Highwaist eLeopard
Cuup Ukushona eCitrine
Cuup The Thong eCitrine
Iyini imicabango yakho ngokulingana, ikhwalithi, nokuklanywa kwama-bras? Nginikeza uCuup i-A ++ yokwakhiwa, kepha akumangazi lapho. Bengilokhu ngibuka lo mkhiqizo selokhu wawuqala, futhi ubuhle buhlale buqhathaniswa nokuqhathaniswa nabancintisana nabo isikhala sangaphansi . Nami ngiyayithanda le nto - ithambe kakhulu futhi ithokomele, kepha izwakala iqinile, sengathi izohlala isikhashana. Ibhendi iyabambezela, kepha ngokususelwa kusayithi, kuzwakala sengathi baklanyelwe ukuqala ukukhishwa okungeziwe ukuqinisekisa ukusekelwa okuhlala isikhathi eside, futhi uzohlangabezana nakho uma usukugqoke izikhathi ezimbalwa.
Ungayenza yini into yokufaka ubra ebonakalayo futhi? Ngokuphelele!
UBella Cacciatore, umhlobo wobuhle
Ngokuzithoba kukaBella Cacciatore
Bekunjani isipiliyoni esifanelekile? Ngabe iqhathaniswa kanjani nokulingana okungaphakathi komuntu? Ngaba nenhlanhla yokufakwa eCuup ngonyaka owedlule futhi selokhu ngashiya yonke ibra enginayo ngithanda isitayela sebalconette yomkhiqizo. Bengifuna ukuzama ezinye zezitayela zayo zokucwila futhi benginelukuluku lokuthi ngabe zizolingana yini, ngakho-ke ukulingana okungokoqobo kwakuyisixazululo esifanelekile. UTania, olingwayo ongisizile, wayemuhle kakhulu, futhi wenza ukuthi okuhlangenwe nakho okungenzeka kube nzima kube mnandi futhi kube lula, njengokukhuluma nomngane. Kwakungenasidingo kangako kunokufakwa ngaphakathi kwebhodisi — zonke izilinganiso zenziwa phezu kwehembe, akekho olungisa ama-boobs akho kodwa wena-ngakho-ke uma unamahloni, yisixazululo esihle.
Bekuyini usayizi wakho onconyiwe? Ingabe behlukile kulokho ovame ukukuthola?
Ukulinganisa kwami ​​okubonakalayo kwakunembile njengokulingana komuntu. Ngithole osayizi abafanayo enginconywe mathupha: 32D no-30E. Noma ngitsheliwe ukuthi ngingafaka indebe ye-E okokugcina, bekusashaqisa ukuzwa-ngine-boobage eningi, kepha lokho kuzwakala kubalulekile.
umsiki wesikhumba ongcono kakhulu wabaqalayo
Yimaphi ama-bras nama-undies owathengile?
Ngenxa yesilingo, ngithole Ukuwa eMoss ku-32D (usayizi wami ojwayelekile) kanye Unxantathu kuBlush ku-30E, njengoba uTania asho ukuthi isitayela sizoba ngcono ngokuthola igumbi elithe xaxa enkomishini kuqhathaniswa neqembu.
Cuup I-Bikini eMoss
Cuup I-Bikini eBlush
Iyini imicabango yakho ngokulingana, ikhwalithi, nokuklanywa kwama-bras?
Ama-bras engiwa-odile mahle nje njengalawa engivele nginawo futhi ngiyawathanda. I-Plunge impela isitayela engisithandayo — umbala oluhlaza uyamangalisa kakhulu, futhi ukulingana kuphelele. Kubukeka kukuhle futhi kumnandi, futhi ngizizwa ngisekelwa ngempela ngaphandle kokungeza noma iyiphi inqwaba. Ngicabanga ukuthi lesi sitayela empeleni singena esikhundleni seBalconette njengokuya kwami, ngoba ngizizwa ngiphephe kakhudlwana futhi nginethezekile kuyo. I-Triangle ingaphezulu kobhodisi wansuku zonke, ngakho-ke akuyona into ethokozisayo ukuyibuka, kepha ilingana kahle futhi inokwesekwa okukhulu. Ngicabanga ukuthi kuzoba inketho enhle ngaphansi kwamajezi alumayo kulobu busika futhi nganoma yisiphi isikhathi lapho ngifuna ukumbozwa kancane kwe-nip. Nami ngathola I-Bikini iyashona ukufanisa bobabili, futhi angikwazanga ukujabula ngokwengeziwe ngabo. Ngiyintombazane yeCuup impilo yonke.
Ungayenza yini into yokufaka ubra ebonakalayo futhi? .
UTalia Abbas, umbhali wezohwebo
Ngokuzithoba kukaTalia Abbas
Bekunjani isipiliyoni esifanelekile? Ngabe iqhathaniswa kanjani nokulingana okungaphakathi komuntu? Ama-vibes amahle kuphela! Cishe yonke into yokungena ngaphakathi komuntu ebenginayo kuze kube manje iphuthunyisiwe futhi ihlelekile ngendlela exakile — futhi yize benginamahloni impela ekuqaleni, uTania, uchwepheshe ofanelekayo, wayenomusa, enesineke futhi eqinisekisa. Unikeze imiyalo eningiliziwe yokuthi ungalinganisa kanjani i-bust and band yami ngentambo nerula (nakanjani ayilungile, i-IMO, kepha uyenze yasebenza!).
Bekuyini usayizi wakho onconyiwe? Ingabe behlukile kulokho ovame ukukuthola? UTania uncome i-32B ne-32C. Ngijwayele ukugqoka i-32B — engiyitholile ngonyaka odlule kufakelwa ubhodisi ongaphakathi komuntu — ngakho-ke kuye ukuncoma usayizi wenkomishi omkhulu bekungukhiye ophansi okunginikeza inkinga yobunikazi ngoba angikaze ngizicabange njengomuntu one-C -cup. Nginqume uku-oda bobabili osayizi ngoba bengifisa ukwazi ukubona ukuthi yini ezongilingana kangcono.
Ngifuna izingubo zami zangaphansi zingenze ngijabule futhi ngihlangane, ngakho-ke ngiyale amasethi amabili afanayo: I-Balconette futhi Ukuwa eCitrine naseLeopard. Ukukhetha okunengqondo kakhudlwana bekungahle kube ukuthola okuthile okumnyama, njengotshani obuthambile noma u-chocolate onsundu ocebile. Kepha umbala ophuzi umbala wami ojabulisayo, ngakho-ke silapha. Ukuphrinta ingwe nakho kuwuhlobo lwami lokungathathi hlangothi, futhi ngase nginqumile ngaphambi kokulungela ukuthi ingwe ebekiwe kumele ibe ngeyami. Ngithathe amabhodlela afanayo ngezitayela ezimbili ezihlukene— I-Bikini futhi I-Highwaist . Angikaze ngigqoke iphenti logogo, kepha nganginelukuluku lokufuna ukungena ensimini entsha.
Cuup I-Balconette eCitrine
Cuup The Highwaist eCitrine
Iyini imicabango yakho ngokulingana, ikhwalithi, nokuklanywa kwama-bras? Uyazi umuzwa lapho konke kungena endaweni? Yileyo ndlela engazizwa ngizama ngayo kubras. I-32B ilingana kahle — imichilo yamahlombe ayembi, izinkomishi zikhulu ngokwanele, futhi nebhande lilungele uhlaka lwami oluncane. I-32C, njengoba bekulindelekile, isebenza ngokukhululeka, kepha hhayi kangangoba iqinisekisa ukuthi kubuyiswe. Kuhle izinsuku lapho amabele ami ezizwa esinda futhi edinga ukwesekwa okwengeziwe. Ngiklanywe ngobuhlakani, ngingu ukhathazekile ngamabras amabili engiwakhethile. Angikaze ngibe uhlobo lwentombazane yesikibha ekuqaleni, futhi izitayela ze-Cuup's mesh zikhawula konke engikufunayo kubhodisi wansuku zonke: ukwesekwa okulula, induduzo, nokuthinta ukudlala. Angikholwa ukuthi empeleni ngikusho lokhu, kodwa zilingana kahle kakhulu ukuthi empeleni bengikuthokozela ukugqoka ama-bras futhi.
Ungayenza yini into yokufaka ubra ebonakalayo futhi? Ngingathanda — futhi ngokuzayo ngibe nesiqiniseko sokuthi ngiba neteyipu yomthungi kimi!
ubiza malini ukulethwa
imibala yezinwele eziphezulu zango-2015
okufanele ugqoke ngaphansi kwengubo engenamhlane
yini ongayinika i-pedicure